Kiraa Gireedara | | Awash Tenders
Oromia, Oromia-Finfinne, Shewa
Oromia Region East Shewa Zone Jibat Woreda FEDB
Kallacha Oromiyaa Dec3,2020
Caalbaasii Bittaa Meeshaalee
Godina Shawaa Lixaatti Waajjirri Maallaqaa fi Walta’rinsa Diinagdee Aanaa Jibaat(Shanan) Magaalaa Finfinnee irraa KM 185 Magaalaa Godinaa (Amboo) irraa KM 70 fagaatee kan argamu yoo ta’u hojii daandii aanichaaf kan oolu Gireedera Daandii Sirreessu labsii bittaa mootummaa lakk, labsii 157/2002 bu’ura godhachuun caalbaasii ifaatiin dorgomsiisee kireeffachuu barbaada
Caalbaasii kun guyyaa Gaazexaa Kallacha Oromiyaa irratti maxxanfamee bahe irraa eegalee ibsa meeshaalee kan qabate sanada qarshii hin deebine qarshii 200 kaffaluun guyyaa hojii sa’aatii 2:30 hanga 11:30tti Waajjira M/W/D/Aanaa Jibaat biiroo lakk. 4tti qaamaan argamuun bitachuu ni dandeessu.
Dorgomtoonni Caalbaasii kanaa caalbaasiin guyyaa bahe irraa eegalee yeroo hunda guyyaa hojii sa’aatii 2:30 hanga 11:30tti Waajjira M/W/D/Aanaa Jibaati sanada fudhachuun gatii irratti guutuun saanduqa dhimmakanaaf qophaa’e keessa buusuu qabu.
1. Gibira bara kanaa kan kaffalee fi koppii ragaasaa dhiyeeffachuu kan dan’da’u.
2. Galmaa’aa VAT ta’uu isaa koppii ragaa isaa dhiyeeffachuu kan dan’da’u.
3. Dorgomtoonni Biiroo MWD/Oromiyaatti galmee dhiyeessitoota meeshaalee fi tajaajila keessatti kan galmaa anii fi koppii ragaa kanaa dhiyeeffachuu kan danda’an akkasumas websayitiin kan galma’an yoo ta’e koppii ragaa kanaa dhiyeeffachuu kan danda’an.
4. Dorgomaan caalbaasii kanaa kamiyyuu qarshii deebi u 20,000 (kuma digdama) kabachiisa caalbaasii CPO baankiidhaan mirkanaa’e ykn biidi bood dhiyeessuu qaba.
5. Dorgomaan caalbaasii kanaa meeshaalee caalbaasii kanaaf dhiyaatan guutummaan guutuutti ykn gar-tokkeen dorgomuu ni danda’u. garuu,gosa meeshaa tokkoo bayyiina ibsameen gadi dhiyeessuu hin danda’u.
6. Dorgomtoonni turtii gatii isaanii guyyaa caalbaasiin kun baname irraa jalqabee hanga waliigaltee mallatteessuun meeshaalee mo atan hanga dhiyeessanitti gatiin isaanii kan ragga’e ta’a.
7. Mo‘ataan caalbaasii kanaa yeroo waliigaltee mallatteessu wabii raawwii hojimaata gaarii gatii waliigalaa meeshaalee mo‘atan 10% CPO baankiidhaan mirkanaa’e qabsiisuu qabu.
8. Dorgomtoonni gatii ittiin dorgoman sanada caalbaasii irratti guutuun dhaabbaticha qaama anga’een mallattaa`ee chaappaa gochuun Orijinaalaa fi koppii isaa poostaan saamsuun guyyaa caalbaasiin kun Gaazexaa Kallacha Oromiyaa irratti maxxanfamee bahe irraa eegalee guyyaa hojii mootummaa walitti fufiinsaan guyyaa 15niif guyyaa hojii hunda sa’aatii 2:30 hanga 11:30tti Waajjira M/W/D/Aanaa Jibaat biiroo lakk. 4tti saanduqa caalbaasii kanaaf qophaa’e keessa galchuu qabu. Saanduqni caalbaasiis gaafa guyyaa 15ffaa sa’aatii 8:00 irratti cufamee sa’aatii 9:00 irratti bakka dorgomtoonni ykn bakka bu’aan seeraa isaanii jiranitti ni banama. Guyyichi guyyaa ayyaanaa ykn guyyaa cufaa yoo ta’e guyyaa hojii itti aanu sa’aatii ibsametti kan banamu ta’a. haata’u malee argamuu dhabuun dorgomtootaa caalbaasii kana gufachiisuu hin danda’u.
9. Namni waliigaltee Caalbaasii kana raawwachiisuu dhufu umriin isaa waggaa 18 ol ta’uu qaba.
10. Dorgomtoonni caalbaasichaa lakk. Herrega Baankii socho aa ykn CPO kan qaban ta’ee ragaa mirkaneessu dhiyeessuu qabu. Sanadni caalbaasii erga banamee booda yaada dhiyaate jijjiiruu ykn mormuu kan hin danda’amnedha.
11. Adeemsi caalbaasii kan raawwatu Afaan Oromootiin ta’ee ibsa meeshaalee dhiyaatutti Afaan Ingiliffaan itti dabaluun ni dandaa’ama.
12. Dorgomaan kamiyyuu kan inni dorgomu danda’u sanada caalbaasii Orijinaala qofaan ta’a. Ibsa dabalataaf Lakk. bilbila 011-239-00-97/86/04,0913311591, 0921597575,0921434514 Waajjira Maallaqaa fi Walta’insa Diinagdee Aanaa Jibaat.